Igodo isii maka Ọganihu Ndị Ahịa Na-eji Social Media | Martech Zone
Anyị kesara ọnụ ọgụgụ banyere uto nke ndị ahịa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta, na ihe omuma ozi a na-ewe ya ntakịrị, na-enye mkpịsị ugodi 6 dị iche iche maka ụlọ ọrụ gị iji tinye aka iji hụ na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma. Ọrụ ndị ahịa Lousy nwere ike imebi ahịa gị, yabụ ọ dị mkpa maka ndị ahịa iji nyochaa mmetụta na oge nzaghachi site na mgbasa ozi mmekọrịta.
N'ime otu nyocha JD Power karịrị ndị 23,000 na-azụ ahịa n'ịntanetị, 67% nke ndị zaghachiri kwuru na ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ site na mgbasa ozi mmekọrịta maka nkwado. Agbanyeghị, ịnọ na soshal midia naanị ezughị. Iji jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, azụmahịa ga-akpachara anya na otu ha si ege ntị, na nke kachasị mkpa, otu ha si azaghachi. Nweta ụwa
Nke a bụ igodo 6, site na infographic Ndụmọdụ dị elu iji jiri Social Media na Ọrụ Ndị Ahịa, si Global Outsourcing:
Họrọ nke kacha mma Social Media n'elu ikpo okwu nke dabara na Nzube Azụmaahịa Gị - anyị bụ onye nnọchi anya maka Agorapulse nke m gha akwadoro ulo oru obula. Ikpo okwu na-egosi mmekorita gị dị ka igbe mbata, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịza ma ọ bụ nyefee azịza okwu n'ụzọ dị irè.
Nyochaa Social kwuru - ndị ahịa na atụmanya ga-ekwu banyere gị na mgbasa ozi na-enweghị mkpado ma ọ bụ gwa gị okwu ozugbo. Ọ dị mkpa ka ị jiri ikpo okwu ebe enwere ike ịdọ gị aka ná ntị mgbe akpọrọ gị ka ị gaa n'ihu maka nsogbu ndị ahịa. Nke a bụ ihe ọzọ dị ukwuu nke Agorapulse, N'agbanyeghị.
jiri Aka nri nke olu mgbe nile - a naghị atụgharị sassy azịza ya nke ọma n'ịntanetị, yabụ kpachara anya iji mezie nzaghachi gị na arịrịọ a na-eme. Ndị otu gị kwesịrị ilekọta… na-ada ka ha na-eche… ka ị ghara iburu nyocha ma ọ bụ nkatọ ọzọ site na netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Cheta Mee na Emela nke Social Media - elegharala, hichapụ ma ọ bụ zoo ihe, bụrụ ihe na-agbachitere, tinye aka na trolls, ma ọ bụ mee ka ndị ahịa gị jiri ọtụtụ ozi. Kelee ha maka iwebata gị esemokwu a, kweta na ha nwere nsogbu, ma rịọ mgbaghara maka nsogbu ahụ. Nke ka nke, hụ na ị ga - enweta mkpebi nke ga - eme ka onye ahịa nwee obi ụtọ.
Jiri nke a ọdọ Àmamihe - 91% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị kwuru na ha ga-eji otu ihe ọmụma ama ama ma ọ bụrụ na ọ dị ya ma hazie ya maka mkpa ha.
Mara Mgbe I Ga-ewe Ihe Esemokwu Na-adighi - nzuko ọha na eze dị ka mgbasa ozi ọha na eze nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma maka ndị ahịa iwe na nsogbu dị mgbagwoju anya. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịrịọ onye ahịa ka o soro gị, jikọọ na ha site na ozi ziri ezi, ma kpalie mkparịta ụka ahụ na ekwentị site na ekwentị ma ọ bụ ihu na ihu ebe ị nwere ike inyere ha aka nke ọma.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa infographicahịa ọrụ ọmaọpụpụ zuru ụwa ọnụinfographicelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media infographic
Allocadia: Wulite, Sochie, ma Tụọ Atụmatụ Mgbasa Ozi Gị na Nnukwu Obi ntụkwasị obi na njikwa